အရေးပေါ်ကိုယ်ဝန်တားဆေးများဟာ ကိုယ်ဝန်ကို ဘယ်လိုတားဆီးပေးသလဲ - Hello Sayarwon
အရေးပေါ်ကိုယ်ဝန်တားဆေးများဟာ ကိုယ်ဝန်ကို ဘယ်လိုတားဆီးပေးသလဲ
အရေးပေါ်ကိုယ်ဝန်တားဆေးများဟာ အတူနေချိန်မှာ အကာအကွယ်သုံးဖို့ မေ့နေခဲ့ခြင်း၊ မှန်ကန်စွာ မသုံးမိခြင်း၊ ကွန်ဒုံးပေါက်ပြဲခြင်း စတာတွေနဲ့ ကြုံရတဲ့အခါ ကိုယ်ဝန်ကို အရေးပေါ်ကာကွယ်ဖို့ နည်းလမ်းတစ်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့် အတူနေပြီး ၃ရက်အတွင်း အရေးပေါ်ကိုယ်ဝန်တားဆေးသောက်ရင် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြေ လျော့နည်းစေပါတယ်။ ၂၄နာရီအတွင်း သောက်မယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြေက ၁%၊ ၂%လောက်ပဲ ရှိတာမို့ စိတ်အချရဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီဆေးတွေကို ကိစ္စပြီးလို့ မနက်မှာသောက်တဲ့ဆေး (morning after pill)လို့ ညွှန်းကြပါတယ်။ ၄-၅ရက်လောက်နေမှ သောက်ရင် သိပ်မထူးပါဘူး။
အရေးပေါ်ဆေးများဟာ ဟော်မုန်းများကတဆင့် ကိုယ်ဝန်ကို တားဆီးပေးပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အောက်ပါ သက်ရောက်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
– မျိုးဥကြွေခြင်းကို တားဆီးခြင်း
– သုက်ပိုးကို သန္ဓေမအောင်စေရန် တားဆီးပေးခြင်း
– သန္ဓေအောင်ပြီးမျိုးဥကို သားအိမ်တွင် တွယ်ကပ်မှု မရှိစေခြင်း။
ကိုယ်ဝန်ရသွားပြီးချိန် သောက်ရင်တော့ အကျိုးသက်ရောက်မှု မရှိပါဘူး။ ရပြီးသားကိုယ်ဝန်ကိုလည်း မပျက်ကျစေပါဘူး။
အရေးပေါ်တားဆေးနဲ့ ကိရိယာတွေကို အောက်ပါအတိုင်း ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ပါဝင်တဲ့ ဆေးပမာဏပေါ် မူတည်ပြီး တစ်လုံးတည်း သောက်ရတာ ရှိသလို နှစ်လုံး သောက်ရတာလည်း ရှိပါတယ်။ ဆေးအညွှန်းကို သေချာဖတ်ပါ။ နှစ်လုံးပါတဲ့ ဆေးဆိုရင် ပထမ တစ်လုံးကို ၂၄နာရီအတွင်း နောက်တစ်လုံးကို ၇၂ နာရီအတွင်း သောက်ရတာမျိုးရှိပါတယ်။ မေ့မှာ ကြောက်ရင် နှစ်လုံး တစ်ပြိုင်တည်း သောက်လို့ ရပါတယ်။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၇၂ နာရီ အတွင်း သောက်ဖြစ်အောင် သောက်ပါ။ စောစောသောက်လေ ကာကွယ်နိုင်စွမ်း ပိုမြင့်လေပါပဲ။
နောက်တစ်ခုသိထားရမှာက ဒီနေ့မှာ အရေးပေါ်တားဆေးသောက်ပြီး နက်ဖြန်မှာ အကာအကွယ်မဲ့ လိင်ဆက်ဆံမယ်ဆိုရင် ရှေ့ရက်က သောက်ထားတာတွေက မကာကွယ်နိုင်ပါဘူး။ အစက ပြန်သောက်ရမှာပါ။ အရေးပေါ်တားဆေးကို ခဏခဏသောက်မယ့်အစား ရေရှည်မှာ ပုံမှန်တားဆေးကို သုံးဖို့ စဉ်းစားပါ။
progesterone နဲ့ estrogen နှစ်မျိုးစလုံး ပါဝင်ပါတယ်။ ဆေးပမာဏများများသောက်ရင် အရေးပေါ်ကိုယ်ဝန်တားဆေးအနေနဲ့ သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်။
– Copper-T ပစ္စည်း
ရေရှည်ကိုယ်ဝန်တားဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သားအိမ်အတွင်း ထည့်သွင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကြေးနီဓာတ်ဟာ သုက်ပိုးနဲ့ မျိုးဥပေါင်းစပ်ပြီး သန္ဓေအောင်နိုင်ခြင်းကနေ တားဆီးပေးပါတယ်။ အရေးပေါ်အနေနဲ့လည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။ အတူနေပြီး ၅ရက်အတွင်း သုံးနိုင်ပါတယ်။
နှစ်ရှည်သန္ဓေတားချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ပြန်မထုတ်ဘဲ ဆက်ထည့်ထားလို့ရပါတယ်။
အရေးပေါ် ကိုယ်ဝန်တားဆေးများဟာ အကာအကွယ်မပါဘဲ အတူနေပြီးချိန်မှာ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြေကို လျှော့ချပေးနိုင်တဲ့ဆေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အတူနေပြီးချိန်မှာ မြန်နိုင်သမျှမြန်အောင် သုံးရပါမယ်။ အထူးသဖြင့် ၅ရက်အတွင်း သုံးသင့်ပါတယ်။ ကြာသွားရင် မထိရောက်တော့ပါဘူး။
How Does Emergency Contraception Work?. http://www.webmd.com/sex/birth-control/how-emergency-contraception-works#1. Access December 16, 2016
အရေးပေါ်သန္ဓေတားဆေးကို သောက်ပါများရင် ဘေးကင်းပါ့မလား